नेपालमा एमसीसी अमेरिकाको लागि प्रतिष्ठाको विषय (भिडियाेसहित) | ईमाउण्टेन समाचार
भदौ १८, २०७८ पढ्न १० मिनेट
भारतीयहरुसँग भएका विभिन्न सन्धी सम्झौताबारे नेपालमा अहिले सम्म तीब्र असन्तुष्टि छ। ती सन्धी सम्झौताहरुका कारण नेपालले कयौं नोक्सान व्यहोर्नु परेको छ । अहिले देशभित्र सर्वाधिक विरोध भइरहेको विषय हो एमसीसी सम्झौता । हरेक दिन एमसीसी खारेज गर्नु पर्ने माग बढीरहेको छ । जता ततै गो व्याक अमेरिका र नो एमसीसी जस्ता नारा जबरजस्त रुपमा उठेका छन् ।
संसदबाट एमसीसी पास गराई सक्नु पर्ने मिति गुज्रिसकेको छ । नेपालीहरुले चाँहिदै चाँहिदैन भनेको एमसीसी अन्र्तगतको सहयोग गर्न अमेरिकाले लगातार प्रयत्न गरिरहेको छ । यसै प्रसँगमा आगामी साता एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स लगायतको टोली नेपाल आउँदै छ । जसले सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मुख्य मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने छन् । यो भ्रमणको उद्देश्य एमसीसी सम्झौता अघि बढाउनु नै हुने छ । जसका लागि अनुकुल वातावरण मिलाउन एमसीसी उपाध्यक्ष नेपाल आउँदै छिन् ।
प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको पद बहाली नै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने विषयसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । यस अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि भरपुर प्रयास गरेका थिए तर तत्कालीन नेकपाभित्र सहमति जुटाउन नसके पछि यो विषय मत्थर भएको थियो । तर देउवा र ओली एमसीसीका पक्षधर नेता हुन् भन्नेमा दुइ मत छैन । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पास गराउन तत्पर अवस्थामा छन् ।
प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल एमसीसी सम्झौतामा सानो तीनो संसोधन आवश्यक छ भनेर, भनिरहेका छन् । उनीहरुले हुबहु रुपमा एमसीसी अनुमोदनका लागि तयार छैनौं भने पनि सत्तामा गएपछि चुपचाप बसेका छन् । यस अर्थमा देशभित्र रहेका प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरु एमसीसी भित्र्याउन सकरात्मक छन् भन्ने नै हो ।
यतिबेला एमसीसी बारे भिन्न मत राख्ने भिम रावलहरु राष्ट्रिय राजनीतिको मियो पात्र छैनन् । उनीहरु पार्टीकै मुल धारबाट किनारा लाग्दै गएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा एमसीसी दिन प्रतिदिन चर्चा र चासोको विषय बनिरहेको छ । नेताहरुले जनताको बीचमा भाषण गर्दा एमसीसी बारे जे भन्छन् सत्तामा हुँदा आफ्नै भाषण विपरीतको भूमिका खेली रहेका छन् । नेताहरुको यस्तो दोहोरो चरित्रले एमसीसी नेपालको हितमा हुन सक्दैन भन्ने कुरा थप पुष्टी गरेको छ । एमसीसी बारे नेताहरुको विचित्रको चरित्र देखिँदै छ।
यसैपनि एमसीसी नेपालको विकासका लागि डंका पिटे जस्तो धेरै ठूलो अनुदान होइन । यो अनुदानले जुन परियोजना बनाउने भनेको छ, विज्ञहरुका अनुसार उक्त परियोजनका लागि अमेरिकाले दिने सहयोगको एक तिहाइ मै परियोजना सम्पन्न भइसक्ने छ । विज्ञहरुको यो भनाईलाई आधार मान्ने हो भने, एमसीसी परियोजनामा १३ अर्ब रुपैँया नेपालले पनि थप्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यदि एमसीसीमा मिसाइने नेपाल सरकारको १३ अर्ब रुपैँयामा केही रकम नेपाल थप्ने हो भने, यो परियोजना नेपालले आफ्नै बलमा आफ्नै लागतमा बनाउन सक्ने छ ।
सरकारले बुझ्नु पर्ने महत्वपूर्ण कुरा के भने नेपाली जनताले एमसीसी भित्र्याएर विकास गर सरकार भनेर भनेको अवस्था छैन । जनता त राष्ट्रलाई घात गर्ने कुनै पनि अनुदान नभित्र्याउ भनेर निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन् । जनताको यो आवाजलाई एमसीसी पक्षधरहरुले किन नजर अन्दाज गरिरहेका छन् ? भोलि यसको जवाह दिन सक्ने हैसियत नेताहरुसँग छ कि छैन? यस कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ।
एमसीसीको मुख्य उद्देश्य नेपालमा अमेरिकाको स्थायी चलखेल बढाउनु हो भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गइरहेको छ । अन्यथा एमसीसीले नेपालमा आफ्ना स्थायी भौतिक संरचना बनाउने विषय प्राथमिकतामा राख्दैन थियो । यो परियोजना मार्फत नेपालको खनिज जन्य श्रोतमाथि प्रभुत्व जमाउने अमेरिकाको दिर्घकालिन रणनीति छ । यस्तो उद्देश्य राखेर अमेरिकाले प्राकृतिक रुपमा सम्पन्न विश्वका विभिन्न राष्ट्रमा आफ्ना आधिपत्य जमाइरहेको छ । त्यस्तै षड्यन्त्रको सानो अंश नेपालीमा एमसीसी सम्झौता हुन सक्छ । यसले नेपाल वैदेशिक हस्तक्षेपको क्रिडास्थल बन्ने सम्भावना बोकेको छ ।
यस अघि पनि नेपालले छिमेकी देशसँग गरेका विभिन्न सन्धी सम्झौता पछि, पटकपटक पछुताउनु परेको कयौं उदाहरण छन् । आफ्नै देशलाई तल पार्नेगरी सन्धी सम्झौता गर्नै मनोदसा नेताहरुका किन छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो । भारतसँगका कतिपय असमान सम्झौताले नेपाल माथि उठ्न नसक्ने गरी गरिबीको धेराबन्दीमा परेको छ । त्यसमाथि अमेरिकाको हित हुने गरी भित्र्याइने एमसीसीले अमेरिकी हस्तक्षेपको वर्षा नै हुन सक्छ । यस्ता अनुदानले नेपालीको हातमा गरिबी र अस्थिरता बाहेक केही नहुने अवस्था आउनु अघि नै सचेत हुने कि?
माउन्टेन टेलिभिजन, राजनीति‐मा वर्गिकृतamerica, nepal, एमसीसी
पार्टीलाई विभाजन गर्नुको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन नेकपा समाजवादी पार्टीको नेतृत्वलाई नेम्वाङकाे चुनौति
फातिमासँगै एमसीसी फिर्ता होस् (भिडियाेसहित)